U-Israyeli ngoku uvumela abakhenkethi baseRashiya abane-2 jabs ye-Sputnik V ukuba bangene kwilizwe
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » I-Israel Iphula Iindaba » U-Israyeli ngoku uvumela abakhenkethi baseRashiya abane-2 jabs ye-Sputnik V ukuba bangene kwilizwe
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • Icandelo lokungenisa izihambi • I-Israel Iphula Iindaba • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Iindaba zaseRashiya eziQhekezayo • Safety • Tourism • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku
U-Israyeli ngoku uvumela abakhenkethi baseRashiya abane-2 jabs ye-Sputnik V ukuba bangene kwilizwe.
Imiba yobuchwephesha nesemthethweni ifunyenwe kwinkqubo ekhoyo yokungena kubakhenkethi bangaphandle, okuthetha ukuba kuya kwenzeka ukuba abakhenkethi abagonywe ngeSputnik V beze kwaSirayeli ukuqala nge-1 kaDisemba 2021.
I-Israel inika imvume yokungena kwiindwendwe ezigonywe ngesitofu esenziwe eRashiya se-COVID-19.
Abakhenkethi abagonywe ngokupheleleyo ngeSputnik V baya kuvunyelwa ukuba bangene kwaSirayeli ukuqala nge-1 kaDisemba.
Isitofu sokugonya saseRussia ngokwaso samkelwa ngu-Israyeli ukusuka nge-15 kaNovemba ka-2021.
UMphathiswa wezeMpilo noKhenketho kwaSirayeli kunye neofisi ye Inkulumbuso yakwaSirayeli ikhuphe ingxelo edibeneyo namhlanje, ibhengeza ukuba iindwendwe ezivela kwiRussian Federation, eziye zafumana izithonga ezimbini zeRussian-ezenziwe. ISputnik V Isitofu sokugonya i-COVID-19, siya kuvunyelwa ukuba singene kweli lizwe ukuqala nge-1 kaDisemba.
“Imiba yobuchwephesha nesemthethweni ifunyenwe kwinkqubo ekhoyo yokungena kubakhenkethi bangaphandle, okuthetha ukuba kuya kwenzeka ukuba abakhenkethi abagonywe ngeSputnik V beze kwaSirayeli ukuqala nge-1 kaDisemba 2021. Ngelo xesha, ulungelelwaniso lwenkqubo luya kusekwa, lusemthethweni. uqulunqo kunye nezibophelelo zigqityiwe, kwaye indlela yokungena iya kusebenza ngaphandle kweengxaki ukwenzela ukunyamekela impilo yabemi base-Israel kunye nabakhenkethi, ukubonelela ngeemeko ezikhululekile kunye namava amnandi okuhamba. Senze isigqibo sokuba uSirayeli uya kuvuma ngokusemthethweni isiRashiya ISputnik V iyeza ngoNovemba 15, 2021,” yatsho ingxelo.
“Kwiiveki ezimbini ezidlulileyo, i-Israel ivule iingcango zayo kubakhenkethi abagonywe ngogonyo olwamkelwa yi-WHO. Ngenxa yokugonywa ngempumelelo kwabemi bakwaSirayeli ngedosi yesithathu kunye neziganeko eziphantsi zesifo, iNkulumbuso yakwa-Israeli uNaftali Bennett, kunye noMphathiswa wezeMpilo uNitzan Horowitz kunye noMphathiswa wezoKhenketho uYoel Razvozov benza isigqibo sokususa izithintelo ezongezelelweyo kunye nemida evulekileyo. kubakhenkethi abagonyelwe iSputnik V kwaye bafumene uvavanyo lwe-antibody,” yatsho ingxelo.
Ukusukela ngoMatshi ka-2020, i-Israel ibivaliwe kukhenketho. Ukungena kweli lizwe kwakunokwenzeka kuphela kubemi ababuyayo okanye abaphambukeli abafumene imvume ekhethekileyo. Ukusukela ngoMeyi, njengenxalenye yenkqubo yokulinga, amaqela aliqela okundwendwela angaphandle alungelelanisiweyo aye amkelwa kweli lizwe, egonywe ngokupheleleyo ngamachiza avunywe yi-US.
UMphathiswa wezoKhenketho wase-Israel ubhengeze ngo-Epreli ukuba uthatha umhla we-1 kaJulayi njengosuku olunokwenzeka lokuqalisa ukwamkelwa kwilizwe labakhenkethi abagonyelweyo bevela kumazwe ahlukeneyo ngokomntu ngamnye, kodwa ukuphunyezwa kwezi zicwangciso kwahlehliswa amaxesha amaninzi ngenxa imeko yobhubhane.
Ngomhla woku-1 kuNovemba, u-Israyeli wavula imida yakhe okokuqala kwiinyanga ezingama-20 kubakhenkethi bangaphandle abagonywe ngaphezu kweenyanga ezintandathu ezidlulileyo kunye neziyobisi ezivunyiweyo ze-WHO, ngokuxhomekeke kwinani leemeko zenani lezitofu kunye ne-booster ezifunyenweyo. Abaphambukeli abahlangabezana nale miqathango kufuneka benze uvavanyo lwe-swab kwiiyure ezingama-72 ngaphambi kokuba bahambe kwaye babe bodwa kwisikhululo seenqwelomoya iBen Gurion kwaSirayeli de kufumaneke isiphumo esibi. Ukuze bavunyelwe ukuba bangene kwa-Israyeli, abantu basemzini zingaphelanga iintsuku ezili-14 ngaphambi kokuba bangene "abanakukwazi ukuba sezweni lendawo ebomvu, ngenxa yokoyikiswa kokusasazeka kwe-coronavirus," utshilo uMphathiswa wezeMpilo ngaphambili.